खाना खानुभयो ?दुनै झर्ने बेलुका ?आलु लाने, आलु ? लग न हो, अलि राम्रोराम्रो हेरेर । सिमी लग्ने, सिमी ?झोला नाईँ । स्याउ पनि नाईँ ।
आराध्य चन्द्रमामा मानिसले टेके भन्ने खबर फैलिएका बेला भूगोलविद् ब्यारी सी. बिसप साविकको कर्णाली अञ्चलमा थिए । त्यहाँका मानिसले उनलाई यस बारेमा सोधेछन् । ब्यारीले भनेको एउटा कुरामा उनीहरूले खास चासो राखेछन्— जुम्लाका मानिसले ४५० पटक जति काठमाडौँ ओहोरदोहोर गर्न र पृथ्वीबाट चन्द्रमा पुग्न उति नै दूरी पार गर्नुपर्छ ।
एक महिना पहिले सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली महोत्सवमा भएका छलफलमध्ये एउटाको शीर्षक थियोः कालापहाडका तोडा । कालापहाड भन्नाले भारत र तोडा भनेको रुपियाँ पैसा राख्ने थैली । त्यस छलफलमा कालापहाडमा काम गरेर नेपालीले ल्याउने रुपियाँ पैसा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने झल्काएको थियो ।
जाने होइन दाइ आलापोट ?सर्जक मंजुलले लेखेको यो नामको यात्रा संस्मरणको किताब मैले २०४७ साल भदौमा छापेको थिएँ । आलापोट अर्का स्रष्टा आभाषको काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तरी भेगमा पर्ने गाउँ हो ।
‘अप्रिल फुल’ अर्थात् अरूलाई ढाँटेर आनन्द लिने कामका लागि छुट्याइएको दिन आउन अझै १० दिन बाँकी छ । त्यस दिन हामी आफूलाई कसैले ढाँट्ने पो हुन् कि भनेर सतर्क हुन्छौं । अप्रिल फुलका दिन मानिसलाई ढाँट्न नसकिएला भन्ने ठानेर ढाँटहरूले हामीलाई अरू दिन ढाँटिरहेका छन् । हल्ला र त्यसमार्फत आतंक फैलाइरहेका छन् ।
‘जिन्दगीका ७४ वसन्त र ७४ पतझड कहिले आए, कहिले गए थाहै पाइएन । जिन्दगीसँग कुनै गुनासो पनि छैन किनभने यसले मलाई जहाँ दुःख दियो, त्यहीँ दुःखको ओखती पनि दियो । उदासी दियो त खुसी पनि दियो । आँसु दियो त मुस्कुराउने कला पनि दियो । काँडाको बिस्तरा दियो त त्यही काँडाको बिस्तरामा निद्रा पनि दियो । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा, सबैभन्दा ठूलो उपहार त जिन्दगीले मलाई सायरी दियो । शब्दसँग शब्द जोड्ने सीप दियो ।’
उहिले–उहिले होइन हिजोअस्ति अर्थात् एक सय वर्ष अघिसम्म, एकादेशमा पनि होइन हाम्रै देशमा, पति मरेपछि पत्नीलाई उनका पतिको लाशसँगै जिउँदै जलाउने गरिन्थ्यो । यसरी जल्नुलाई सती जानु भनिन्थ्यो ।